युरोपको थुप्रै देशमा पुग्यो कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकार, बढ्यो चिन्ता – Esewanews
Home / Headline / युरोपको थुप्रै देशमा पुग्यो कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकार, बढ्यो चिन्ता
युरोपको थुप्रै देशमा पुग्यो कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकार, बढ्यो चिन्ता
Shivaram Khadka Headline, शिक्षा/स्वास्थ्य, समाचार Leaveacomment 9768 Views
युरोपका थुप्रै देशले कोरोनाभाइरसको अत्यधिक संक्रामक नयाँ प्रकार पाइएको पुष्टि गरेका छन् । यो भाइरसको त्यहि प्रकार हो जसको पहिचान सबैभन्दा पहिले बेलायतमा भएको थियो ।अब स्पेन, स्विडेन र स्विटजरल्याण्डले बेलायतको यात्राबाट फर्केका आफ्ना नागरिक कोरोनाभाइरको नयाँ भेरियन्टद्वारा संक्रमित भएको पुष्टि गरेका छन् ।
बेलायतमा भाइरसको नयाँ प्रकार भेटिएको खबर पाएपछि थुप्रै देशले आफ्ना नागरिकको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
स्पेनको राजधानी मेड्रिडमा बिहिबार बेलायतबाट फर्केका एक व्यक्तिका तीनजना आफन्तमा कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्टको पुष्टि भएको छ । यो जानकारी शहरका डेप्युटी हेल्थ चीफ एन्टोनियो जापातेरोले दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘चौथो संक्रमित पनि बेलायतबाट फर्किएका एक व्यक्ति हुन् । यद्यपि, कोही पनि बिरामी गम्भीर रुपमा बिरामी छैनन् त्यसैले डराउनु पर्ने आवश्यक छैन ।’
ओन्टोरियो क्यान्डाका एक जोडीमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखिएको छ । उनीहरु पछिल्लो समयमा कतै यात्रा पनि नगरेको र उच्च जोखिममा भएका मानिसहरुको सम्पर्कमा पनि नरहेको अधिकारीले बताएका छन् ।
फ्रान्स, स्विटजरल्याण्ड, स्पेन र स्विडेनमा पनि संक्रमितः
यसअघि शनिबार बिहान फ्रान्सले पनि आफ्नो देशमा बेलायतको यात्राबाट फर्किएका एक व्यक्ति नयाँ स्ट्रेनद्वारा संक्रमित भएको खबर दिएको थियो । संक्रमित व्यक्तिमा कुनै लक्षण देखिएको छैन र हाल उनले आफूलाई घरमा नै आइसोलेट गरेर राखेका छन् ।
भाइरसको नयाँ भेरियन्टको पुष्टिपछि फ्रान्सले बेलायतसँगको आफ्नो सीमा बन्द गरेको थियो । यद्यपि, बुधबार यसले युरोपेली संघका नागरिकका लागि सीमा खोलिदिएको थियो । शर्त स्वरुप उनीहरुले आफ्नो कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट पेश भने गर्नु पर्नेछ ।
स्पेन र फ्रान्सबाहेक स्विटजरल्याण्डले पनि तीन जनामा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट पाइएको जानकारी दिएको छ । यीमध्ये दुई बेलायती नागरिक हुन् जो क्रिसमसको छुट्टी मनाउन स्विटजरल्याण्ड गएका थिए ।
स्विटजरल्याण्ड एउटा मात्रै यस्तो देश हो जसले क्रिसमसको मौकामा विदेशी पर्यटकका लागि आफ्नो सीमा खोलेको थियो र यसैकारण पछिल्लो केही हप्तामा हज्जारौं बेलायती नागरिक छुट्टी मनाउन यहाँ पुगेका थिए ।
स्विडेनको एक ट्राभल एजेन्सीले बेलायतबाट फर्किएका एक व्यक्तिको स्वास्थ्य बिग्रिएको र उनले आफूलाई आइसोलेट गरेको जानकारी दिएको छ ।
डेनमार्क, जर्मनी, इटली, नेदरल्याण्ड र अष्ट्रेलियामा पनि मानिसहरु कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्टको चपेटमा आएको पुष्टि भइसकेको छ ।
जापानले बेलायतबाट फर्केका पाँच जापानी नागरिक पनि संक्रमित भएको शुक्रबार जानकारी दिएको छ ।
कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्ट के हो ?
कोरोनाभाइरसको नयाँ स्ट्रेनको पहिचान सबैभन्दा पहिले लण्डन, दक्षिण–पूर्वी ब्रिटेन र पूर्वी ब्रिटेनमा भएको थियो ।
ब्रिटेनको सरकार अनुसार आजकाल देशमा कोरोना पोजेटिभ भइरहेका मानिसहरुमा दुई तिहाई संख्या नयाँ भेरियन्टद्वारा संक्रमित हुनसक्छन् । यद्यपि, यो एक अनुमान मात्रै हो ।
भाइरसबारे तीन प्रमुख कुरा जसले दुनियाँलाई चिन्तामा पारिरहेको छः
– यसले निकै छिटो कोरोनाभाइरसको अन्य रुपको स्थान ओगटिरहेको छ ।
– यसको म्युटेशनले भाइरसको त्यो हिस्सामा परिवर्तन भएको छ जसले मानिसको कोसिकामा असर पारिरहेको छ । यसमा …. नामको म्युटेशन भएको छ जसले शरीरको कोसिकालाई प्रभावित गर्छ ।
– प्रयोगशालामा देखिए अनुसार यीमध्ये केही म्युटेशनका कारण भाइरसले मानिसको कोसिकालाई संक्रमित गर्ने क्षमता बढ्ने गर्छ ।
BBC का स्वास्थ्य तथा विज्ञान संवाददाता जेम्स गेलाघरका अनुसार यी कारणले भाइरसको नयाँ भेरियन्ट निकै सजिलै फैलन सक्छ ।
यद्यपि, हालै तयार भएका प्रमुख भ्याक्सिन कोरोनाभाइरसको यो परिवर्तित रुपमा पनि प्रभावकारी हुने विशेषज्ञले बताएका छन् ।
१२ पुष २०७७, आईतवार ०२:५५